Super Human Beings – 92 0MAMA by Han Htue Lwin (May 4/2021) – PVTV Myanmar
Saine Aung says:
2021-06-04 at 12:10 PM
ဒါအမှန်တရားပါပဲ ကျတော်လူမျိုးတွေက ဘာလို့ခုလောက် Thinking အပိုင်းမှာ တခြားတဖက်ကို မတွေးကြည့်ကြတာလဲဆိုတာ ခုပြောသွားတာတွေကြောင့်ပါ
KOKA YIN says:
2021-06-04 at 1:53 PM
Myo Myo Zaw says:
2021-06-04 at 2:44 PM
2021-06-04 at 3:20 PM
Dear Han Htue Lwin and PV TV
As the audience are young people and it is VERY disappointing that you are using SWEAR WORDS in your podcast. Please do not use the SWEAR word it reduces the quality of the podcast. It is notagood example for the younger audience and it is also not polite to older audience. PV TV should censor on these SWEAR WORDS before broadcasting the podcast. OUR you yourself should censor yourself.
2021-06-04 at 3:37 PM
2021-06-04 at 4:07 PM
Critical thinking ပါပဲ
စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့သော ပညာရေးစနစ်ကြောင့်အခုလို လူအများ ဝေဖန်နှိုင်းယှဥ်မှု မလုပ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့၊ စဥ်းစားရမှာကို သေရမှာထက်ကြောက်ခဲ့ကြသကိုး….
2021-06-05 at 12:14 PM
CDM လုပ်တဲ့ အနုပညာသမားတွေရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို PVTV က တင်ဆက်ပေးရင်ကောင်းမယ် သူတို့အတွက် entertainment channel တခုလုပ်ပီး တစုတည်းတင်ဆက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်
Kitty Burma says:
Thx for sharing ❤️
Moe Swe Swe says:
eieimyo eieimyo says:
2021-06-06 at 11:49 AM
2021-06-06 at 2:40 PM
ကိုက်ား ေလးစာလြန္းလို႔ ခိုင္းႏႈိင္းစရာစကားလံုးနဲ႔ေတာင္ မတင္စားခ်င္ဘူး ..ေပါ့သြားမွာစိုးလို႔ တကယ့္ကို ေလးစားမိတယ္🤜🤛JG tgo😍
gg ကျားပေါက် မသိသေးတာကိုသိအောင်များများလုပ်ပေးနိုင်ပါစေ
WarWar Min says:
ဒီအချိန်မှာ လုပ်သင့်တဲ့ ပြောသင့်တဲ့
နားထောင်သင့် ဆွေးနွေးသင့်တဲ့အရာတွေပါ ကိုကျားပေါက်နှင့်တကွ အဖွဲ့သားများ အားလုံးကျန်းမာပါစေ
2021-06-28 at 9:28 PM
အဲ့လိုတွေးမြင်ထည့်ပေးတာ မိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ကိုကျား
nwet soepyo says:
2021-07-05 at 4:07 PM